Varotra kely: fonony vita tanana manokana hanakodia ny headphones | Vaovao IPhone
Varotra kely: fonony vita tanana manokana hanakodia ny headphones anao
Gonzalo R. | | Fitaovana IPhone, Fampianarana sy torolàlana
Varotra kely kely iny raharaha raharaha iphone izay hitanao ao amin'ny Etsy, mamorona izy ireo fonony tsapa vita tanana miaraka amina famaranana tena tsara sy mitandrina.
Ireo fonony ireo dia natao manokana ho an'ireo olona mitondra headphone iPhone miaraka aminy foana, anisan'izany ampidiriko ny tenako, miaraka aminy azonao adino fa misavoritaka ny taribinao ao am-paosinao ary manaova korontana. Ity fonosana ity dia ahafahanao mamonosina tariby ao aminy ary avelao hilamina tsara ny zava-drehetra. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny iPhone miaraka amina trano fonenana.
Raha mila antsipiriany sy sary misimisy kokoa ianao dia tohizo ny famakiana aorian'ny fitsambikinana:
Izy ireo dia vita amin'ny fahatsapana Alemanina 3mm. matevina, ity fitaovana ity mandroaka ny rano izy ary tena mahatohitra sy maharitra. Ny mpamorona azy dia i Julian Meyer, mpamorona Alemanina 28 taona izay nanomboka namorona kojakoja raha mbola tao amin'ny School of Design izy, avy eo nanomboka ny orinasany ary nanofa studio kely tao amin'ny vondrom-piarahamonina kanto tany Alemana. Izy rehetra no manao tanana.
Namboarina tamin'ny fomba toy izany izy ireo ka misy lavaka kely tsy voahidy eo ambanin'ny fonony izay ivoahan'ny feo rehefa miantso anao izy ireo (azonao jerena amin'ny sary etsy ambony).
Izy io dia manana sombin-doko miloko eo alohan'ny fonony, aiza azonao atao ny manodina ny headphones anao.
Misy ny fonony amin'ny volondavenona sy mainty, ary ny ampahany izay maratra ny headphone dia azo safidiana mena, maintso, manga, volomparasy, fotsy na mainty (amin'ny horonantsary etsy ambany dia azonao atao ny mahita ireo fitambarana mety rehetra).
Ny vidiny dia € 16,90 ary ny vidin'ny fandefasana any Espana dia € 3 (ary haingana be ihany), ka ara-potoana ianao hanafarana azy amin'ny Krismasy. Ny vidin'ny fandefasana amin'ny faritra hafa rehetra eto an-tany dia $ 5 fotsiny.
Azonao atao ny mividy azy amin'ny magazay Small Trade by ChulianRaha mila loko tsy misy ianao, aza misalasala mifandray aminy, satria faly izy manampy anao sy manomana ny baiko namboarina mifanaraka amin'ny itiavanao azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Varotra kely: fonony vita tanana manokana hanakodia ny headphones anao
Man0 dia hoy izy:
Hevitra fanomezana mahaliana !!
Etsy an-danin'izany, olona iray hafa mitondra fiarovan-doha foana aminy;).
Mamaly an'i Man0
Juan Fernandez dia hoy izy:
Tiako izy ireo, tsara tarehy izy ireo!
Valiny tamin'i Juan Fernandez
iTunes 10.5.2 azo alaina
Hetezo ny tarehin-tady mandeha amin'ny sary